Xukun kufsi oo maxkamadda Oslo 5 nin oo soomaali ah ku riday | WWW.SOMALILAND.NO
Xukun kufsi oo maxkamadda Oslo 5 nin oo soomaali ah ku riday
Afar nin oo soomaali ah ayaa la xukumay kadib markii ay guri ku yaala xaafadda Sinsen ee magaaladda Oslo ku kufsadeen gabadh soomaaliyad ah oo da’deedu tahay 21 jir. Mid shanaad ayaa isna lagu xukumay in uu lug ku lahaa laakiin aanu ka qaybqaadan kufsiga. Maxkamadda go aankan gaadhay ayaa waxay sheegtay in nimanka falkan ku dhaqaaqay ay yihiin qaar ugu soo talo galay.
Saddex ka mid ah ayaa waxaa lagu xukumay midkiiba lix sanadood iyo badh. Ka afraad ayaa lagu xukumay shan sano iyo badh xadhid jeel ah. Halka ka shanaadna lagu xukumay ciqaab ah afar sanadood iyo badh.
Goaanka maxkamadda ayaa la mid ah codsigii ciqaabeed ee ka yimi xeer ilaalinta.
Dacweysanayaasha ayaa waxa kale oo lagu xukumay in ay magdhaw 300.000 oo krone siiyaan qofka danbiga laga galay. Laakiin shantiiba waxay goobtii ku qaateen anbiil. Kiiskan kufsiga ayaa guud ahaan ah kiis aad loo hadal hayey mudadii ugu danbeysey. Waxaana jaraaidka ka soo baxa dalka Norway ka qoreen maqaalo aad u badan oo faahfaahinaya sidii wax u dhaceen. Kuwaas oo ay ka mid ahayd in ula dhaqanka gabadha sidaa loola dhaqmayey ay ku jirto nacayb dadkii samaynayey ay u qabeen qabiilka gabadhu ka soo jeedo oo ay u arkayeen in aaney habooneen in la tixgeliyo. Waa sida ay sheegta gabadhuye.
Arintan ayaa la odhan karaa si kastaba ha u dhacdee waxay ku darsantay dhaqanxumo wax u dhimaysa dadka soomaalida ah ee deggan dalka Norway oo markii horeba waxyaabo badan oo aan wanaagsanayn lagu eedeynayey. Wax yaabahaa oo arintan kufsigu meelo badan kaga jirto oo ay jiraan dad hore oo soomaali ah oo lagu xukumay faldanbiyeedyo kufsi ah. Laakiin kiiskan ayaa ahaa mid gaar ah oo ka duwan kuwii hore, iyadda oo ay ugu wacantahay in dadka la tuhmayo in ay ka qaybqaateen tiradoodu badneyd isla markaana qofka dhibanaha ahi uu yahay gabadh soomaaliyad ah.
« President Rayale visits Tog Wajale, Arabsiyo, Gabilay and Kala Baydh. Daraasad: Wiilasha soomaalida Norway oo noqday qaar isku kalsoon »